अभिनेता विपिन सवारी दुर्घटनामा, फ्लप फिल्मको सिक्वेल के का लागि ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
अभिनेता विपिन सवारी दुर्घटनामा, फ्लप फिल्मको सिक्वेल के का लागि ?
फ्लप फिल्मको सिक्वेल ‘राज्जा रानी २’ के का लागि ?
फिल्मी फण्डा । फ्लप भएको फिल्म राज्जा रानी को समपूर्ण टिमलाई दोहो¥याउँदै सिक्वेल फिल्म राज्जा रानी २ निर्माण गर्न लागिएको बुझिएको छ । औपचारिक रुपमा नभएपनि अनौपचारिक रुपमा निर्माता रमेश एम के पौडेलले राज्जा रानी २ निर्माण गर्न लागिएको खबर बाहिरिएको हो । फ्लप फिल्मको सिक्वेल के का लागि ? त्यो भन्ने निर्माण टिमलाई नै थाहा होला । फिल्ममा केकी अधिकारी र नाजिर हुसेन तथा निर्देशक यम थापा नै रहने बुझिएको छ ।
फिल्म ‘जात्रै जात्रा’को छायाँकन प्रभावित, ‘प्रसाद’को प्रचार र ‘गोपि’ पनि प्रभावित
फिल्मी फण्डा । दुई बर्ष अगाडीको हिट फिल्म जात्राको सिक्वेल फिल्म जात्रै जात्राको छायाँकन प्रभावित भएको छ । फिल्मका मूख्य कलाकार विपिन कार्की सवारी दुर्घटना परेपछि फिल्मको छायाँकन प्रभावित भएको हो । नायक विपिन कार्की सुटिङमा जाने क्रममा कलंकी चोकमा सवारी दुर्घटनामा परेका हुन् । उनी चदेको बाईकलाई पछाडीबाट अर्को बाईकले ठक्कर दिदाँ उनको खुट्टामा असर पुगेको हो । फाल्गुन १७ लाई रिलिज मिती तय गरिएको फिल्म जात्रै जात्राको छायाँन प्रभावित भएको हो । विपिनको प्रसाद रिलिजको लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ । मंसिर २१ देखी रिलिजमा आउन लागेको प्रसादको प्रचार पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । यस्तै अर्को फिल्म गोपिको रिलिज पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । फिल्म गोपिको डविङ कार्य शुरु नभएको बुझिएको छ । फिल्म गोपिले पनि माघ १५ लाई रिलिज मिती तय गरेको छ ।
अभिनेता विपीन कार्कीको दुर्घटना
फिल्मी फण्डा । अहिलेका व्यस्त अभिनेता विपीन कार्की दुर्घटनामा परेका छन् । फिल्म जात्रै जात्राको लागि छायांकनमा जाँदै गर्दा कालिमाटीमा उनी चढेको बाईकलाई अर्को बाइकले ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा पर्दा उनको दायाँ खुट्टा भाँचिएको छ । उनलाई अहिले बल्खु स्थित बयोधा हस्पिटलमा राखिएको छ । बिपिन अभिनित फिल्म प्रसाद गोपि र जात्रै जात्रा क्रमै मंसिर, माघ र फागुनमा प्रर्दशनमा आँउदैछ ।
श्रृङ्खला खतिवडालाई मिस वल्र्ड बनाउन यसरी भोट गर्नुहोस्
फिल्मी फण्डा । हाल मिस वल्र्ड प्रतियोगीताको लागि चीनमा रहेकी मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा अहिले विश्वका सय बढी प्रतिस्पर्धीहरुसँग भिँद्दै आफुलाई टप ५ मा ल्याई अब्बल ठहरहएकी छिन् । उनले नेपालमा चेपाङ्ग बस्तीको लागि सहयोग पुर्याउन प्राजेक्ट पनि गरिरहेका छन् । मिस नेपाल हुनु अघि उनले धेरै प्रतियोगीताहरुमा भाग लिएर जितिसकेकी थिईन् भने अब उनी मिस वल्र्डको ताज उठाउन लागि परेकी छिन् ।
उनलाई भोट गर्ने तरिका यस प्रकार रहेको छ
१। मोब्स्टार नामक एप डाउनलोड गर्ने
२। कुनै पनि समाजिक सन्जाल एकाउन्टबाट लग इन गर्ने
३। अंग्रेजीमा क्जचष्लपजबबि प्जबतष्धबमब सर्च गर्ने
४। निलो थोप्लो भएको प्रोफाइल श्रृंखला लाई फलो गर्ने ९आइओएसमा पहेलो थोप्लो०
५। प्रोफाइल भित्र गइ फोटो, भिडियोलाई देब्रेदेखि दाहिने तिर स्वाइप गर्ने
६। कमेन्ट र लाईक गर्ने ।
७। कमेन्ट र लाईक पनि भोटमा गणना हुनेछ ।
तेजिन्द्र गन्धर्वको स्वरमा “साँईलीरीमई” (गीत)
फिल्मी फण्डा । चर्चित रियालिटी शो “द भ्वाइस अफ नेपाल” बाट बाहिरिएरका तेजिन्द्र गन्धर्वको स्वरमा “साँईलीरीमई” सार्वजनिक भएको छ । गीतमा डि।पी खनालको शब्द, शंकर थापा “स्माइल”को संगीत र उदयराज पौडेलको एरेन्जमेन्ट रहेको छ । गीतको भिडीयोमा तेनिन्द्र आफै फिचर्ड छन् । गीतको भिडियोमा अनिल के मानन्धरको छायांकन, बिकास ज्ञवालीको सम्पादन र बिकाश सुवेदीको निर्देशन रहेको छ।
योजना पुरीको स्वरमा औंठी खसेछ (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायिका योजना पुरीको स्वरमा औंठी खसेछ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा विशाल राईको शब्द तथा संगीत रहेको छ । दीपक आचार्यले निर्देशन गरेको उक्त गीतको भिडीयोमा भद्रगोलका सीते बा, चन्द्रमुखी, करिश्मा ढकाल र बिकाश लामिछाने फिर्चड छन् । सुमन सागर जंग के।सीको कोरियोग्राफी रहेको गीतमा उदयराज पौडेलको संगीत र सुरेश राउतको सम्पादन रहेको छ ।